Nnyocha Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ siri ike V: Ihe Mgbu Ahụ | Akụkọ akụrụngwa
Nnyocha Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ V: Ahụhụ Na-akpata Ahụhụ
Egbe nke ndị Patriots Ọ bụ nkwanye ugwu zuru oke nke ndị akụkọ akụkọ kachasị nke Metal Gear siri ike na anyị amarala kemgbe ahụ echefu echefu Onyunyo moses na ochie PlayStation. Kpamkpam, na n'agbanyeghị ịdọ aka ná ntị ugboro ugboro nke onye okike ya, bụ onye na-ekwenye mgbe niile na nke ọ bụla metal Gear nnofega nke ga - abu nke ikpeazu Ihe Ohuru ee nke ahụ bụ ezi goodbye na nkwụsịtụ na ụdi ilu nke Hideo Kojima de Konami.
Ma nke a abụghị ihe omumu na nostalgia, kama jubilation maka nnyefe nke na-abanye n'ime egwuregwu karịa mgbe ọ bụla, na nke ahụ megidere ihe mere na nanị Egbe nke ndị Patriots, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Ọ bụghị ikpa oke ikpo okwu na-akpa ókè ma dị maka mgbakọ consoles ndị dị ugbu a na nke ikpeazụ.
Ihe Ohuru guzo n'ihu onye ọkpụkpọ nwere ihe ngosi anyị na-ejighị na ya Metal Gear siri ike omenala desktọọpụ: anyị ga-enwe a buru ibu dịruru ná njọ inyocha na nke ma ndị isi ọzọ na-azụlite ibé ga-ekesa - banyere 50 -, yana nke abụọ aga-eme. O doro anya na enweghi kojimadas, ihe ngosipụta doro anya nke onye okike ya, ebe njirimara kacha mkpa nke aghụghọ - nke na-agbanweghị agbanwe- agbakwunyere ihe ndị ọzọ iji gafee ebumnuche dịka eziokwu ga-eme agwọ: ịmụ akwụkwọ ndị iro, ịka akara ebe dị mkpa ma ọ bụ ikpebi ịwakpo ehihie ma ọ bụ abalị, ga-abụ mkpebi na egwuregwu ọ bụla ga-aghọ ihe dị ọcha.
Na mgbakwunye, enwere ike ịmeghachi ọrụ ụfọdụ ọzọ, mana ọnụọgụ nke ndị a ga-adịwanye achọ, na-amanye onye ọkpụkpọ ahụ ime mkpebi okike iji merie ha. N'ụzọ dị otu a, mmepe anaghịzi adị n'usoro ma anyị nwere ike itinye oge na akụrụngwa iji meziwanye Isi ala nne, anyị isi ọrụ. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na nkewa bụ nke oke n'ụba, oge ụfọdụ anyị ga-ahụ ngalaba ndị na-amịghị eziokwu na eziokwu bụ na ọ na-adakọ, n'ihi na ha na-enye mmetụta nke ọ bụghị naanị ịtọgbọrọ chakoo, kamakwa ezughi oke.
Ndi ejiri ya saga Metal Gear siri ike Ha na-eburu n’uche na egwuregwu ọ bụla jupụtara na usoro ihe nkiri sịnịma dị ogologo nke na-akọ akụkọ ahụ, na-arụ ọrụ dị oke mkpa na saga na ọtụtụ ndị mmegide katọrọ. Oge nke a, Ngwá ọrụ nke ígwè Gear Solid V: The Phantom Pain O nweghi otutu oyuyo di otua, n'eziokwu, a na-ekesa ihe ka ukwuu n'ime ihe nkiri a n'etiti okwu mmalite -Ala zeroes- na aha njedebe nke nyocha a. Kpachara anya, ana m akwado gị ka ị ghara ida ọdịnaya nke ụfọdụ teepu casset, ebe ọ bụ na ha na-enye data dị oke mkpa. N'ikpeazụ, n'akụkụ a, m ga-asị na nkata ahụ erughị oke epic nke isi ndị ọzọ, dị ka Agwo Na-eri o Egbe nke ndị Patriots: en Ihe Ohuru O yiri ka etinyekwuola mgbalị na ahụmịhe na-atọ ụtọ.
Na ọkwa teknụzụ, Injin Fox karịrị echiche na nkọwa dịka mmetụta ọkụ, na-akpali egwuregwu ahụ na 60 okpokolo agba kwa nkeji ma na-arụ ọrụ na mkpebi 1080p na usoro ọhụụ. Banyere nsụgharị maka ndị agha ochie PlayStation 3 y Xbox 360Na mgbakwunye na ọdịiche dị iche iche a na-ahụ anya, ọdụ ụgbọ mmiri ahụ na-agba ọsọ na 30 fps -na tụlee n'oge nke nnukwu polygon ibu-na mkpebi kacha elu nke 720p. Ma ka anyị ghara iduhie anyị, na n'agbanyeghị afọ ndị a consoles, pụta rụpụtara na ha na-eme Ngwá ọrụ nke ígwè Gear Solid V: The Phantom Pain ọ bụ ọrụ ebube dị egwu maka ngwaike nke ọgbọ gara aga. Na ngalaba ụda, ihe kacha eme mkpọtụ bụ olu nke Kiefer Sutherland ekwe ka Agwọ venom, mgbe anyị ejirila ụda olu nke David hayter.
Na mpempe, Ngwongwo Ngwongwo siri ike V: The Phantom Mgbu bụ isi na saga nke na-enye ahụmịhe kachasị mma ma baa ọgaranya, ọ bụ ezie na n'akụkụ nke ọzọ nke mkpụrụ ego ahụ, enwere ụfọdụ ozi na-enweghị mmụọ, akụkọ na-adịghị atọ ụtọ na akụkọ na-enweghị akụkọ a na-echefu echefu nke akụkụ ndị ọzọ, na isi ihe ndị a , ịbụ a Metal Gear siri ike, a ghaghi iburu ha n'uche, karie ma oburu na ibu onye na-acho anwu ihe Kojima. Nke a Ihe Ohuru, karie ihe na-aga n'ihu Egbe nke ndị Patriots, kwesịrị ịkọwa dị ka mmalite nke ihe Onye ije udo maka echefuola PSP de Sony, ma, ọ bụ otu n’ime egwuregwu vidio kachasị mma ị nwere ike igwu na 2015.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Nnyocha Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ V: Ahụhụ Na-akpata Ahụhụ
Nyochaa nke TP-Link Archer D5 modem rawụta
Anyị nwalere Mkpa 3, ngwaọrụ pụtara ìhè na mbinye aka Microsoft